Ningbo Albert Novosino (Ningbo Albert China) ndiye ano, yepamusorosoro uye nzira itsva boka nehofisi musoro iri kuGermany. Tine 180 vashandi vari Albert China, pamwe 8 mainjiniya nokuti zvakagadzirwa uye kusimukira zvigadzirwa zvitsva. In musika ose segmented, tinomiririra pamusoro yepamusoro.
Albert Group munhu globalizational kambani ine zvivako muGermany, USA, China uye Poland. Global injiniya Chikwata chendangariro zvakasimba maitiro uye yakakwirira unhu mabasa matsva uye vatengi mhinduro. Global kugadzira chendangariro kutsanya uye vakarongeka hurukuro uye basa.
With rakasiyana nemukurumbira unhu, chigadzirwa utsanzi uye zvekushandisa zvakaisvonaka, isu tanga kubudisa dzakasiyana-siyana dzokurapa giredhi zvigadzirwa nokuda zvokurapa, pachavo zveutano uye maindasitiri misika kwemakore anopfuura 30. Kunze kwedu mureza vakawanda musika zvigadzirwa, isuwo berekai tsika zvigadzirwa pazvivako muEurope, Asia uye North America. Kwemakumi emakore, vatengi vedu kukoshesa mukana wokushandiswa uye yepamusoro zvinodiwa Albert Manufacturing CHINA uye Albert Group.
Tine simba chaizvo uye yakafara kubudiswa kusangana pamusoro unhu pamisika.
Custom Design uye Development
Albert boka Kusimbisa vatengi kukosha. All makore, isu innovate nemamwe zvinhu negadziriso makasitoma edu. Kudyidzana ngatiregei kunzwisisa kudiwa vako chaivo.
Click kudzidza zvakawanda pamusoro Custom Solutions.